141CM AXB Doll Big Naaso Waaweyn Cadaaladda Dadka Waaweyn Cadaanka Tan
Sheekada taariikhda cadaaladda:
Cadaaladu waa caruusad jinsiyeed TPE ah oo dhererkeedu yahay 140cm. Aniga iyo saaxiibteey waxaan u kaxeynay guriga, markaan wadada ku wadnayna, waxaan ku dhiiraday inay ii ogolaato inay i waso. Waxay iska siibtay surwaalkeedii iyo surwaalkeedii, intay cuskatay ayay fadhiisatay xubintaydii taranka. Dhaqdhaqaaqa waa mid gaabis ah oo raaxo leh. Waxaan ka furay buraashkeedii waxaanan salaaxay naasaheeda qaawan.